कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरे ? – Sajha Bisaunee
कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरे ?
। २५ पुष २०७४, मंगलवार १५:२५ मा प्रकाशित
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको महिना बितिसक्दा उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । निर्वाचन मतपरिणाम घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि जिल्लामा निर्वाचन लडेका अधिंकाश उम्मेदवारहरूले चुनावी खर्च विवरण बुझाउन आलटाल गरिरहेका हुन् ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले आफूले चुनावमा गरेको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर सुर्खेतमा ४८ जना उम्मेदवारहरूले आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी सांसद ध्रुव्रकुमार शाही, प्रदेशसभा (क) मा विजयी ठम्मरबहादुर विष्ट र (ख) का सांसद खड्कबहादुर खत्रीले आइतवारसम्म आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट विजयी सांसद विन्दमान विष्टले पनि खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुनिता थापाले बताइन् । उनका अनुसार १० जना उम्मेदवारहरूले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् । कार्यालयका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले चुनावमा १९ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । उनले खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् । यस्तै प्रदेशसभातर्फ सोही क्षेत्रको (क) बाट उम्मेदवार बनेका टेकबहादु सिंहले ६ लाख १९ हजार ५० रूपैयाँ खर्च गरेको विवरण बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट उम्मेदवार बनेका झकबहादुर डाँगीले नौ लाख ५१ हजार ६ सय ४७ रूपैयाँ खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) बाट उम्मेदवार बनेका कालिबहादुर चन्दले पाँच लाख ९१ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । उनले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवार बनेका धनवीर कामीले तीन लाख २१ हजार पाँच सय रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तै (क) बाट उम्मेदवारी दिएका गंगे कामीले भने दुई लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ मा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका हृदयराम थानीले चुनावमा १२ लाख ३० हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ (ख) मा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका तप्तबहादुर विष्टले १४ लाख १० हजार, (क) का उम्मेदवार कमलराज रेग्मीले तीन लाख आठ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
यस्तै नेकपा एमालेबाट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी सांसद नवराज रावतले पनि खर्च विवरण बुझाइसकेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेशसभाका सासंद यामलाल कँडेलले १० लाख ९० हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । निर्वाचन अवधिभर प्रचार–प्रसारका लागि आयोजित चुनावीसभा र कार्यकर्ता परिचालनमा उनीहरूले सबैभन्दा ठूलो रकम खर्च गरेका हुन् । निर्वाचन सकिएको एक महिना पुग्दासमेत ४८ जना उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बझाएका छैनन् । खर्च विवरण बुझाएका ११ जना उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी कार्यकर्ता परिचालनमा खर्च गरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि २५ लाख र प्रदेशसभातर्फका उम्मेदवारका लागि १५ लाखसम्म खर्च गर्ने अधिकार दिएको थियो । जस अनुसार हालसम्म कुनै पनि उम्मेदवारले आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा बढी खर्च गरेको विवरण नबुझाएको निर्वाचन अधिकारी थापाले बताइन् ।
उनका अनुसार विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूले समेत तत्काल बुझाउनका लागि कार्यालयले पत्र पठाउने तयारी थालेको छ । यदि समय सीमामा खर्च विवरण नबुझाए निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको ऐन बमोजिम कारबाही हुने उनले बताइन् ।
भोट ८२, खर्च दुई लाख
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचमा सबैभन्दा कम रकम खर्च गर्ने उम्मेदवारहरूमा गंगे कामी रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । गत मंसिर २१ गतेको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ बाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उम्मेदवार कामीले दुई लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । उनले दुई लाख रूपैयाँ खर्च गरे पनि भोट भने ८२ मात्र ल्याएका थिए । उनले सबै भन्दा बढी सवारी साधनमा खर्च गरेका छन् । निर्वाचन कार्यालयमा उनले पेश गरेको खर्च विवरण अनुसार ६० हजार रूपैयाँ निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि प्रयोग गरिएको सवारी साधनमा खर्च भएको हो । १२ दिनमा सवारी साधन र इन्धनमा गरी उनले एक लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी खर्च खड्काले गरे
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवार बनेका पूर्णबहादुर खड्काले सबैभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री खड्काले निर्वाचन अवधीभर १९ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँ खर्च गरेको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतमा बुझाएका छन् । निर्वाचन कार्यालयकाअनुसार करिब एक महिनासम्म निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा व्यस्त बनेका खड्काले कार्यकर्ता परिचालनमा मात्रै सात लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रचार–प्रसारका लागि सवारी साधनमा उनले पाँच लाख रूपैयाँ खर्च गरेका निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयबाट हामीलाई प्राप्त खर्च विवरण अनुसार प्रचार सामग्रीको छपाईमा एक लाख र ढुवानीमा ७५ हजार गरी एक लाख ७५ हजार रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । खड्काले ३३ हजार तीन सय ७७ मत प्राप्त गरेका थिए ।